Somali News 07.26.21 | KWIT
Toddobaadyada soo socda waxay fure u noqon karaan jihada abaaraha Iowa, sida ay sheegtay Waaxda Iowa ee Kheyraadka Dabiiciga. Iowa DNR's Tim Hall wuxuu leeyahay Iowa xaaladaha qalalan ee Iowa waxaa lagu qabtay isla usbuucii la soo dhaafay iyadoo qiyaastii 70% ee Iowa ku jirta nooc ka mid ah abaarta - iyo ku dhowaad 25% oo leh xaalado abaar oo daran, sida laga soo xigtay Radio Iowa.
Hall wuxuu leeyahay sawirka guud wali wuu kafiican yahay bil kahor. Hall wuxuu leeyahay Iowa waxay yareysey daboolida abaaraha ee ku baahsan qaybta waqooyi ee gobolka - sidaas darteed roobabku way caawiyeen.
Iowa League of United Latin American Citizens, ama LULAC, ayaa martigelinaysa wadahadalkeedii ugu horreeyay ee gobolka Arbacada oo ku saabsan deegaanka iyo Latinos 'booska ku yaal.
Agaasimaha Cimilada iyo Caddaaladda Deegaanka ee Cristina Muñoz
De La Torre wuxuu leeyahay mowduucu wuxuu noqon doonaa sida la isugu dheellitiro ilaalinta deegaanka iyadoo sidoo kale la ilaalinayo dadka ka shaqeeya warshadaha ee inta badan saameeya — sida beeraha iyo hilib ka dhigashada. Labada qayboodba waxay leeyihiin dad badan oo Latino ah.
Golaha Magaalada Sioux ayaa maanta u codeyn doona qorshe lagu abuurayo barnaamij duulimaad oo si buuxda la aqoonsan yahay. Bishii Juun, goluhu wuxuu si aqlabiyad leh ugu codeeyey qayb ka mid ah ajandaha ogolaanshiyaha si loogu casuumo soo-jeedinta kirada dhulka iyo dhismaha xarun cusub oo hangar loogu talagalay Oracle Aviation, LLC.